Abantu abane babulewe, uninzi lwenzakele kwimoto eyenzelwe 'ngenjongo' eJamani
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » ulwaphulo-mthetho » Abantu abane babulewe, uninzi lwenzakele kwimoto eyenzelwe 'ngenjongo' eJamani
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • ulwaphulo-mthetho • Iindaba zaseJamani zokuPhula • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Imoto ihlakula kwindawo enabantu abahamba ngeenyawo kwidolophu yaseJamani i-Trier ngolwesiBini emva kwemini, ibulala abantu abane ubuncinci kwaye yenzakalise uninzi.
Amapolisa aseJamani kamva aqinisekisile ukubhubha kwabantu abane. Ngelixa isenzo somqhubi sibonakala ngathi besenziwe ngenjongo, umtshutshisi woluntu uthi akukho zimpawu zobunqolobi zobuSilamsi.
Umqhubi, othethwe ngamapolisa ukuba ngumhlali oneminyaka engamashumi amahlanu anesihlanu wase-Trier-Saarburg, uqhube iRange Rover engwevu emnyama ehamba kwindawo ezihamba abantu esixekweni ngoLwesibini, ethumela amaxhoba "ebhabha emoyeni," ngokwamangqina . Waye wabanjwa kwindawo yesehlo, emva kokuba izithuthi zamapolisa zathi zangxolisa imoto yakhe ukuyimisa.
Inkulumbuso yelizwe laseRhineland-Palatinate uMalu Dreyer uthe usana luphakathi kwaba bane babhubhileyo, logama usodolophu waseTrier uWolfram Leibe uxelele oonondaba ukuba umphumo wesisiganeko "ukhangeleka ngathi ufike emva kwemfazwe," ngelixa wayezibambe iinyembezi ngexesha lenkomfa noonondaba.
Ethetha neentatheli ngolwe-Lwesibini, umtshutshisi woluntu wathi umrhanelwa wayenxilile ngexesha lokubulawa. Umtshutshisi wongeze ukuba umqhubi ebengenazigwebo zangaphambili kwaye kwakungekho nto ibonisa ukuba uhlaselo lwakhuthazwa ngamaSilamsi okanye ezinye iinkolo.
Emva kwale ntlekele, amapolisa acele abantu bendawo ukuba bangabelani ngeefoto kunye neevidiyo zeso sehlo kwi-intanethi. Imifanekiso kunye neefoto ezivela kwindawo yokubonisa zibonisa ukungcola okusasazeke kwizitalato ezinqatyisiweyo, njengoko amagosa eqhubeka nokuphanda ngesi sehlo.
I-Qatar ivula ngaphezulu kwe-100 kwiihotele ezintsha zeFIFA ye-2022 yeHlabathi ...
Ukhenketho luqhuba ukubuyiselwa koqoqosho eJamaica ukusukela ...
URhino Tourism waziswa eTanzania Mkomazi Park